सरकार रक्षात्मक, प्रतिपक्ष उदास - Jhilko
चीनमा एउटा कथा प्रचलित छ । कथा अनुसार एउटा राजमार्गमा एक जोडी हाँस र कुखुरा चरिरहेका रहेछन् । ठीक त्यसैबेला तीब्र बेगमा एउटा मालबाहक ट्रक उनीहरु भएतिरै दौडिंदै आयो । यसैबीच कुखुरोले भनेछ, ‘हेर, साथी हामीलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न पखेटा प्राप्त भएको हो । अब हामी उडौं नत्र ट्रकले किचेर हाम्रो इहलीला समाप्त हुन्छ ।’ कुखुराको कुरो सुनेर हाँसले भनेछ, ‘हेर मित्र, मेरो पखेटा शृङ्गारको लागि हो । उड्नको लागि होइन् । तिमी उडे उड मबाट यो काम हुने छैन ।’ नभन्दै ट्रक नजिकै आइपुग्यो । कुखुरो उडेर जोगियो । हाँसलाई ट्रकले कुल्चियो र उसको ठाउँको ठाउँ मृत्यु भयो । ठीक समयमा ठीक निर्णय नगर्दा र साधनस्रोतको पहलकदमी नलिँदा देखिएको यो दुर्घटना हो ।
नेकपाको वर्तमान सरकारको नियति पनि यो कथा भन्दा फरक छैन् । संसको दुई तिहाइ बहुमतलाई यस्तै शृङ्गारको साधनको रुपमा लिइरहेको भान हुन्छ । सरकारको नेतृत्व पनि बारम्बार दुई तिहाई मतको शृङ्गारिक गुणगान गाइरहन्छन् र सरकार पाँच वर्षसम्म निर्वाध चल्ने घोषणा गर्न चुक्तैनन् । तर, सारमा भने राजनैतिक परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको विल्कुल ख्याल गर्दैनन् । हिजो आउँदाको जनमतमा रमाइरहँदा कतै हाँसको नियति भोग्नु पर्ने स्थिति त आउँदैन ? यस विषयमा सरकार गम्भीर भएको देखिन्न । यतिसम्म कि पहिलो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार कसरी विघटन हुन पुग्यो र कांग्रेस शनैशनै कमजोर हुँदै गयो भन्ने शिक्षासम्म लिएको देखिन्न ।
शिक्षाको वार्षिक प्रणाली अनुसार मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सरकारले पहिलो वर्ष पूरा गरेर दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सेमेष्टर प्रणालीमा सरकारको मूल्याङ्कन दुई सेमेष्टर पार गरेकोमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दुवै प्रणाली अनुसार सरकारको संपरीक्षण गर्दा सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । जनअपेक्षा धेरै तर काम प्रभावकारी र व्यवस्थित ढङ्गले नहुँदा निराशा र असन्तुस्टि बढ्दो छ । महङ्गी, भ्रष्टाचार, कमिशनको जालोमा प्रहार केन्द्रित हुन सकेको छैन । प्रारम्भमा जनपक्षीय काम अभियानात्मक रुपमा लाग्दा जनतामा निकै ठूलो आशा पलाएको थियो । एउटा मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउने तर अर्काे मन्त्रालय या राज्यका अर्काे निकायले अबरोध सिर्जना गर्ने कार्य भए ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता, मेलम्चीको अनिश्चितता, ऊर्जामा विदेशी लगानी र निर्यातका विषय, कामचोर ठेकेदारलाई तत्काल कार्वाही गर्नेमा हिच्किचाहट, यातायातको सिण्डिकेट, गैससलाई नियमन गर्ने, सुनकाण्डमा प्रारम्भमा जति प्रभावकारी काम भयो, निरन्तरता हुन नसकेकाले सरकारले विरोध गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको हो । हुनत सुनकाण्डमा अदालतको समेत हस्तक्षेप भएको हो, दोषीलाई सरकारले थुन्ने, अदालतले छाड्ने गरेको थियो, जसको पटाक्षेप अहिलेका प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरिरहेका छन् । निर्मला पन्त छानविन प्रकरणमा स्थानीय प्रहरीले प्रारम्भमा देखाएको हेलचेक्र्याइँले सिङ्गो सुरक्षा व्यवस्थामै प्रश्न उठेको छ । हुनत नेपालमा सुनिता नमितादेखि मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको वंशनाससम्म अनेको दुर्घटनाका पटाक्षेप हुन सकेको हैन । यसो भनेर स्थानीय प्रहरीको प्रारम्भको लापर्वाही क्षम्य छैन । सरकारले पछि तिनीहरुलाई कार्वाही त ग¥यो तर जनविश्वास फिर्ता अझै लिन सकेको छैन ।
युनिफिकेसन चर्चको होलीवाइन प्रकरण र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा सरकारले देखाएको द्वैध मनस्थितिले चाहेर पनि सरकारको पक्षमा माहोल बनेन । हुनत यसबीचमा सरकारले विम्स्टेक, चीनसँग भएको पारवहन प्रोटोकल सहमतिमा देखाएको सक्रियता देशको हितमा दूर महत्वको काम गरेको थियो । तर, त्यस यता आएर सरकार झिनामसिना कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिने काममा अभ्यस्त भएको छ । कमजोर प्रतिपक्षको आलोचना गर्ने, सरकारकाले गरेको कामको विवरण परिणाममा नदेखिने, सस्तो लोकप्रियताको लागि आत्मप्रशंसामा रमाउनाले सरकारको पक्षमा माहोल बन्न सकेन । सानातिना सुधारको काम गर्दा नै ह्वात्तै जनमत बढ्न सक्ने नेपाली जनताको मनस्थितिलाई बुझ्न नसक्दा सरकार अलग–थलग हुँदै गएको छ ।
नेकपाका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले यसअघि नै सरकारको सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेपछि विपक्षलाई सरकारको आलोचना गर्ने बाटो प्रशस्त भइसकेको थियो । थप माथि उल्लेखित प्रकरणका विषयमा सरकारले कुनै प्रकारको सम्बोधन नगर्दा सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नु अस्वाभाविक हैन । हुँदाहुँदा पशुपति शर्माको गीत प्रकरण पनि सरकारलाई भारी भएको छ । सूचना सञ्चारको द्रुत विकास भएको अवस्थामा सामान्य तिललाई फोड्न बम पड्काए जस्तो विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल थामी नसक्नु उम्लिएको छ । यो प्रकरणमा सामान्य विमति हुनु अनौठो होइन तर यसैलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेर उम्लिदा अनुत्पादक भयो ।
सत्तारुढ दलको संस्थागत एकीकरण तलसम्म हुन सकेको छैन् । यस्तो बेलामा सरकारले जति नै अपिल गरे पनि कार्यकर्ता अरिङ्गाल, मौरी हुने त कुरो भएन, भएन बारुलासम्म हुने स्थिति छैन । पार्टीको संस्थागत विकास नहुँदाको यो परिणति पनि हो । पार्टीका माथिल्ला बैठकहरुले नीति तथा कार्यक्रम तय नगर्दा पनि सरकार खरो उत्रन नसकेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिखेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्न अभ्यस्त छ । यस्तो लाग्छ कांग्रेससँग दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वका राजनैतिक योजना तथा कार्यक्रम छैन । यसैले प्राविधिक रुपमा सरकारले छोडेका शेषफलमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछ र कांग्रेसी राजनीतिको समसामयिक तुष्टि पूरा गर्दछ । डा. गोविन्द केसीको अनसन प्रकरण बक्स अफिसमा फेल भएपछि कांग्रेस खेलो हराएको जस्तो भएको थियो । तर, ऐन मौकामा पशुपति प्रकरण आएपछि उसले राजनीतिको पाखे गीत गाउने मौका पाएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय जीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीति, योजना तथा कार्यक्रम नहुँदा कांग्रेसको उफ्राइ पनि पानीको फोका सरह भएको छ ।
जस्तो आफू उस्तै च्यापु
राजनीतिमा सत्ता पक्षले राजनीतिक व्यापार दिने गर्छ । यस्तो राजनीतिक व्यापार सत्तापक्षले नदिएको भने हैन । चीनसँगको पारवहन सहमति, एसिया प्यासिफिक तथा इण्डो प्यासिफिक, विमेस्टेक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, पानी जहाज कार्यक्रम लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमको बहस छैन । संविधान संशोधन, संघीयता कार्यान्वन जस्ता अहम् विषयमा पनि कसैको चासो देखिएको छैन । कतिपय प्रदेश सभाले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । यस्तो विषयमा विषय प्रवेश भएको छैन् । करिव दुई सयभन्दा बढी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन छन् । त्यसका निम्ति कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा न त सरकारले पहल गरेको छ न प्रतिपक्षले मुद्धा तेस्र्याएको छ । यस्तो लाग्छ पक्ष र विपक्ष चल्तीको उखान जस्तो आफू उस्तै च्यापु जस्तो लाग्छ । ठूला तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धामा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट गरेमात्र राजनीतले ठीक लिक पकड्छ । नत्र आमसमुदाय राजनैतिक मुद्धा नपाएर श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण गर्न हिँड्छन् । अहिले ठीक यस्तै भइरहेको छ । यस्तै राजनैतिक बहस नहुँदा सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुग्नुलाइ अनौठो मान्नु हुन्न । प्रतिपक्ष मूल राजनैतिक मुद्धाबाट तपशीलका घटनामा केन्द्रित छ । कांग्रेस निर्वाचन पराजयको डिप्रेसनबाट उठ्न नसकेकाले उदास छ । यस्तो परिदृश्यमा सरकार सानातिना मुद्धालाई थेग्न नसकेर हैरान परेशान भएको हो । –समयबद्धबाट
अमेरिकामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवसान, फेसबुकले पूर्व जानकारी बिना लोकप्रिय पेज...
जङ्गली हात्तीले सप्तरीमा उत्पात मच्चायो, दश घरमा क्षति
कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रबाट निस्केको जङ्गली हात्तीको आक्रमणले सप्तरीको...
विकासको नाममा मानिसलाई भौतिक प्राणी र यान्त्रिक प्राणीको रुपमा दिएको गलत परिभाषा...